काठमाडौंमा ‘रेडबुल स्टोर’ मा छापा मार्दा जे देखियो , यी चार जनाले गरे यस्तो काम - Mountain Media
देशभर सर्वसुलभ रूपमा पाइने रेडबुल प्रतिबन्धित भएको हुनाले बेच्न नमिल्ने अपराध महाशाखाले जनाएको छ । पक्राउ गरिएका आरोपीहरूले भारतबाट त्यस्ता पेय पदार्थ ल्याएर बेच्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । प्रहरीका अनुसार महाशाखाबाट खटिएको विशेष टोलीले उक्त चार जनालाई गत ५ गते न्युरोड, सिनामंगल, पुरानो बानेश्वर, कपन गोठाटारबाट रेडबुल बिक्री वितरण गर्दागर्दै पक्राउ गरेको हो । पक्राउ गरिएकाहरूलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाइने एसएसपी खापुङले बताए ।
Previous: घरको दक्षिण दिशाबाट तुरुन्त हटाउनुहो’स् यी चिज, नत्र हुन्छ आर्थिक संकट
Next: ओहो कस्तो संयोग ! दुरुस्तै देखिने जुम्ल्याहा दाजुभाइसँग कहिलेकाहीँ श्रीमतीहरु पनि झुकिन्छन, कसरी भयो एउटै घरमा बिहे ? हेर्नुहोस